पूर्णिमाले ११ दिनको फरकमा विश्वका तेस्रो र चौथो अग्लो हिमालको सफल आरोहण • Nepal's Trusted Digital Newspaperपूर्णिमाले ११ दिनको फरकमा विश्वका तेस्रो र चौथो अग्लो हिमालको सफल आरोहण • Nepal's Trusted Digital Newspaper
गोरखा । गोरखा आरुघाटकी पूर्णिमा श्रेष्ठले ११ दिनको फरकमा विश्वका तेस्रो र चौथो अग्लो शिखर चुम्नुभएकाे छ। वैशाख २३ गते पूर्णिमाले कञ्चनजंघा (८,५८६ मि.) र मंगलबार ल्होत्से (८,५१६ मि.) हिमालको सफल आरोहण गर्नुभएकाे हाे। मुलुकको ध्यान स्थानीय चुनावमा केन्द्रित भइरहेका बेला फोटो पत्रकारसमेत रहनुभएकी श्रेष्ठ भने हिमाल आरोहणमा व्यस्त हुनुहुन्छ।
यसअघि उहाँले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (८,८४८ मि.), धौलागिरी प्रथम (८,१६७ मि.), मनास्लु (८,१६३ मि.), अन्नपूर्ण प्रथम (८,०९१ मि.) र अमदब्लम (६,८१२) हिमालको आरोहण गरिसक्नुभएकाे छ।
लगत्तै अरू दुईवटा हिमालसमेत यही सिजनमा आरोहण गर्ने योजना रहेको उहाँले सुनाउनुभयाे। ‘यही सिजनमा ८ हजार मिटरभन्दा अग्लो अर्को हिमाल आरोहणको सपना बुन्दैछु’, उहाँले भन्नुभयाे, ‘त्यसपछि नेपालतर्फबाट चढ्ने सबै उच्च हिमालको आरोहण सकिनेछन्। तर हिम्मत र आँट मात्र भएर पनि नपुग्ने रहेछ।’ हिमाल आरोहण यात्रामा सहयोग गर्न उहाँले अनुरोध गर्नुभएकाे छ।